Zọpụtara si mkpebi
Ruo ogologo oge ọgbakọ nile ga-adịgide n'ụwa, amara na-adị. Ugbu a onye ọ bụla nwere ike bịakwute Jizọs ka a ga-azoputa!
Otu n’ime ihe mere ụfọdụ mmadụ ji ezighi ezi na Chineke na-ezipụ ikpe bụ na ha na-akpọsa iwu. N'ihi iwu a, ha na-eme mkpebi na-ezighi ezi mgbe oke mkpagbu ahụ ga-aba.
Ahapụrụ ya na mkpebi ahụ
Rom 3: 16-18. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya wee ghara ịla n'iyi, kama nwee ndụ ebighi ebi. 17. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara-Ya n'uwa ka O kpe uwa ikpé; kama ka ewe site n'aka-Ya zọputa uwa. 18. Ekpeghi onye kwere na ya ikpe, ma onye n’ekweghi ikpe am ekpeghi ya ikpe, n’ihi na o kweghi n’aha nke Okpara Okpara Chineke muru.
Ihe a nile na akowa na Chineke zitere Jisos ị zoputa - zoputa anyi site na ikpe. Ndi mmadu nile bu ndi ikpe, ma ha n’ekpeghi ikpe ma ha nata Jisos. Ọ bụrụ n ’n’ihi ihe ụfọdụ achọghị ịnabata Jizọs, a ga-ekpe gị n’ikpe.
Ihe onodu akwukwo nso ekwughi na Chineke na eziga ikpé, ma ihe okwu a kwuru bu na Chineke zitere Jisos izoputa ma zoputa anyi site na ikpe. Ọ bụ ihe na-esighi na Bible na aghụghọ ikwuwapụta na Chineke na-ezisa ikpe ugbu a site na ọrịa ntiwapụ (dịka coronavirus), agha na ọdachi n'oge ọgbakọ na amara.
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ anyị na-agụ na-ekwu hoo haa na Chineke eziteghị Jizọs ka ọ kpee ụwa ikpe, kama ka ọ zọpụta ya.
N'ezie, Chineke ekwesighi ikpe ụwa ikpe n'ihi na ọ ga-emezurịrị! Ma ka ewe gbue gi ma zọpụta gi site na ikpe a, i kwesiri inweta Jisos ma ka azoputa gi.
Jizọs kpere ikpe ma taa ya ahụhụ mgbe ọ nwụrụ n'obe Calvary na ebe anyị. Ugbu a Jizọs biela ikpe, ewepu anyị. Ma tọhapụ anyị, anyị nwere okwukwe na ya.
Y’oburu na anoputara anyi ugbu a site na ikpe nke Jisos, ya bu na Chineke apughi ikpe anyi ozo. Jizọs ebula ya!
Otu n’ime ihe mere ụfọdụ mmadụ ji ezighi ezi na Chineke na-ezipụ ikpe bụ na ha na-akpọsa iwu . N'ihi iwu a, ha na-eme mkpebi na-ezighi ezi mgbe oke mkpagbu ahụ ga-aba.
Iji ọnụ dị otú ahụ mkpọsa, otu ebe na owuwe mgbe oké mkpagbu ahụ tiwapụrụ, nke bụ kpam kpam unbiblical. O bu otu a ka ha si bia na nkwenye na Chineke na-ezipu ikpe site na oria, oria ojoo, agha na odachi. Ma Akwụkwọ Nsọ kuziri n'ụzọ doro anya na ụdị ihe ndị a esiteghị na Chineke.
Ugbu a ikekwe otu onye nwere ike ịchọta ụfọdụ okwu okwu rụrụ arụ na agba ochie, ma ọ bụ n'ụzọ niile, na agba ohu nke nwere ike ịpụta na Chineke ka na-ezipụ ikpe, yabụ ị gaghị achọta ụdị ihe ahụ n'oge ọgbakọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọsa ha na nhụsianya, ị ga-eme ya ebe ọzọ karịa ebe a na Apg29.nu. N'ihi na ebe a na saịtị blog a, ekwusaghị ozi ọma nke Jizọs Kraịst na otu a ga-esi zọpụta - ọ bụghị ozizi ụgha nke Chineke na-ezite ikpe na nhụsianya.
Uzo esi asugharia ndi Rom 8: 1-4:
Ndị Rom 8: 1-4 N'ihi ya, a gaghị enwe ịma ikpe maka ndị bụ nke Kraịst Jizọs . 2 N’ihi iwu ime mmụọ nke metụtara ndụ Kraịst Jizọs mere ka m nwere onwe m n’iwu nke mmehie na ọnwụ. 3 Ihe iwu apughi ime, nihi na odighi aru n’anu aru ayi, Chineke me ya. Mgbe ọ hapụrụ nwa ya ka ọ bụrụ onye mmehie, zigakwa ya ka ọ bụrụ àjà mmehie, ọ mara mmehie ahụ n’ime mmadụ. 4 Site na iwu nke ezi omume puru imezu ndi n’ebi site na Mo Nso ghara ime dika nke anu aru. (Akwụkwọ 2000)
Rom 8: 1-4 Ya mere agagh enwe amam ikpe diri ndi no n’ime Kraist Jisos . 2 N'ihi na iwu nke Mọ Nsọ, nke n givesnye ndu site na Kraist Jisus, emewo ka iwu nke nmehie na ọnwu guzogide ayi. 3 Iwu ahụ esighi ike n'ihi na ọ bụ n'ihi ọdịdị mmehie, enweghị ike ime ihe Chineke mere site n'izite Ọkpara nke aka ya n'ụdị nwoke mmehie, ka ọ bụrụ àjà mmehie. Mgbe ahụ, ọ mara ikpe mmehie ahụ ya. 4 Ya mere iwu nke ezi omume puru ime n’ayi ayi n’ebubeghi site na udidi nke anyi kama site na Mmuo. (NuBibeln)
Ndị Rom 8: 1-4 Ọ dịghị ugbu a ịma ikpe maka ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs . 2 N'ihi na iwu nke Mọ nke ndu nime Kraist Jisus emewo ka mu onwem debe iwu nke nmehie na ọnwu. 3 Ihe adighi ike n’ihi iwu ahu, adighi ike dika onodu aru nke Chineke si di, site na izite Okpara ya dika onyinye nmebi-iwu, onye nke di n’azu di ka onye nmebi iwu n’aru ya, Chineke mara ikpe nmehie. 4 Ya mere ka iwu ahu g’emezu n’ime anyi ndi n’enweghi ndu dika aru ma obu site na Mo. (NIV)
Rom 8: 1-4 Ya mere [n'ihi ihe Jizọs mere, lee Ọrụ Ndịozi 7:25], ugbu a ọ dịghị amamikpe maka ndị nọ na Kraịst Jizọs . 2 N'ihi na iwu nke Mọ nke ndu nime Kraist Jisus emewo ka mu onwem debe iwu nke nmehie na ọnwu. 3 Gini bu ihe anaghi ekwe omume n'ihi iwu, n'ihi na odighi ike n'ihi odidi nke aru (aru), Chineke mekwara ya. O zitere Ọkpara nke aka ya (n’ụwa) ka ọ bụrụ àjà mmehie, n’ebe anụ ahụ dị n’etiti mmadụ na-eme mmehie (n’anụ arụ, n’anụ) ma maa mmehie ikpe n’ụdị mmadụ dara ada (na-ekpe ikpe ma na-eme ihe e kpere megide anụ ahụ n’anụ). 4 Otu a ka iwu nke iwu si dị otua - na-ekwusi ike na iwu zuru oke, lee Rom 13: 9] ga-emezu n'ụzọ zuru oke n'ime anyị ndị anaghị eje ije (dịka ndụ anyị) dịka madụ anyị dara (anụ ahụ) mana mgbe mmụọ nsọ gasịrị. (Core Bible)
Rom 8: 1-4. Ya mere, ugbu a, odighi amuma maka ndi no n’ime Kraist Jisos , ndi n’emeghi ka aru ju dika anu aru si di, kama dika Mo. 2. Iwu nke mmụọ nke ndụ n'ime Kraịst Jizọs mere ka m nwere onwe m pụọ n'iwu nke mmehie na ọnwụ. 3. N'ihi na ihe adighi ike n'ihi iwu, n'ihi na adighi ike site n'anu-aru, otú a ka Chineke mere, mb hee O zitere Ọkpara-Ya n'oyiyi nke aru-nmehie, na n'ihi nmehie, mara nmehie ahu n'anu-aru; n'ime anyị ndị na-adịghị ebi ndụ n'anụ arụ kama ọ bụ na mmụọ nsọ. (Mb)
Vecka 31, måndag 2 augusti 2021 kl. 17:54